Sirta caafimaadka iyo soonka. Dr. Saadiq Enow | Wadamagoo News
Sirta caafimaadka iyo soonka. Dr. Saadiq Enow
June 23, 2016 - Written by Mustafe Maxamuud Maxamed
Diinta Islaamka oo caqiido dhab ah, ayaa waxay ku caan baxday ilaalada masaalixda aadamiga. Arintaas waxay ku soo koobtay, qof kasta oo ku abtirsada bulshada aadamiga, in la dhowro hantidiisa, sharafkiisa, naftiisa wakhtigiisa iyo caafimaadkiisa. Wax kasta oo dhaawac u geysanaya mid kamid ah arimahaas, diinta Islaamku waa ay reebtay. Waxay ka dejisay xeerar adag oo ilaalinaya inaan lagu cayaarin. Islamarkaa Islaamku wuxuu soo dhoweeyay wax kasta oo arimahaas hagaajinaya. Bal cibaado ayuu ka dhigtay, Eebe xaggiisa lagaga helayo dhowaansho iyo abaal-gud.
Caafimaadka jirka aadamiga, waa maslaxadda 1-aad oo diinta Islaamku ay qofka iyo bulshada u ilaalisay. Nicmadaha Eebe uu ku manaystay aadamiga, midka ugu hilan culus waa caafimaadka. Sidaa darteed in la dhowro waa waajib uu islaamku goor hore dalbay. Ilaalada caafimaadka, danta laga leeyahay waxay tahay in qofku uusan gabin ujeeddadii loo abuuray ee keentay uunka, taas oo ah, fal cibaado iyo mid cilmi ah in uu ku camiro dhulka.
” Badanaa mid sooman, kaas oo aanan soonkiisii ka heleyn wax dhaafsiisan gaajo iyo haraad “.
” ……………. inaad soontaan ayaa idiin wanaagsan, haddaad tihiin kuwo wax garanaya “.